Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Toki Air sonyere Saber: Tokyo izizi ọhụrụ
Radixx, ụlọ ọrụ Saber na onye na-eweta sọftụwia na-ere ahịa ụgbọ elu, taa mara ọkwa na ụlọ ọrụ abanyela na nkwekọrịta maka ụlọ ahịa ngwaahịa Radixx zuru ezu na TOKI AIR, ụgbọ ala na-amalite dị ọnụ ala dabere na ọdụ ụgbọ mmiri Japan, Niigata. TOKI AIR ga-ebu ụzọ lekwasị anya na atụmatụ ya na ahịa ntụrụndụ mpaghara na ụgbọ elu na-esi na ọdụ ụgbọ elu Niigata gaa n'isi obodo na Japan.
TOKI AIR ahọrọla Radixx ka ọ bụrụ onye mmekọ teknụzụ ya n'ihi ọnụnọ ya guzosiri ike na Japan yana ikike ya imezu usoro iheomume nke ụgbọ elu. Dị ka akụkụ nke njikọ aka ahụ, TOKI AIR ga-eji ohere ngwaahịa Radixx zuru ezu gụnyere Radixx ezyCommerce, Radixx Res, Radixx Go, Radixx Go Touch, na Radixx Insight. Nkwenye nke ụlọ ọrụ zuru oke ga-eme ka ụlọ ọrụ ụgbọ elu nwee ike ịmalite ire ahịa na ngwọta ọgbara ọhụrụ na ịmepụta arụmọrụ site na mmalite nke ọrụ.
"Ihe ngosi ngwaahịa ọ bụla nke anyị hụrụ n'ihe gbasara oge nzaghachi na usoro akpaaka nke ga-enyere aka guzobe ọrụ ụgbọ elu anyị masịrị anyị." Masaki Hasegawa, onye nduzi nnọchite anya, TOKI Ikuku. "Anyị nwere ekele maka otu Saber na Radixx maka ntinye ha iji zute oge mmejuputa anyị. Anyị kwenyere na akara ukwu ha dị na Japan yana nnukwu ngwaahịa ha enyela anyị ohere iji Saber na ụlọ ngwaahịa Radixx guzobe ụzọ na-atọ ụtọ dị ka onye mmekọ teknụzụ anyị họọrọ. "
Iji gosipụta onyinye e-azụmahịa ya, TOKI AIR ga-eji Radixx ezyCommerce ịntanetị ntinye akwụkwọ ntanetị gụnyere Portal Agency njem jikọtara ọnụ nke ndị ọrụ njem mpaghara ga-eji. TOKI AIR ga-ejikwa ọkwa dị elu na akara akara ha n'ịntanetị yana inye site na iji Radixx ezyCommerce Content Management System.
TOKI AIR ga-aga n'ihu na sistemu ọrụ ndị njem Radixx Res emebere iji kwalite atụmatụ azụmaahịa na ntughari, yana azụmaahịa wuru n'ime isi, na-enye njikwa njikwa ụgbọ elu yana ọrụ bara uru. Ọ bụ mgbagha a gbanyere mkpọrọgwụ ga-eme ka ụlọ ọrụ ụgbọ elu guzobe ngwa ngwa ego na onyinye enyemaka yana megharịa usoro na-enyere aka ịrụ ọrụ nke ọma. Ihe nleba anya nke oge a, nke nwere nghọta na-akwado mkpa ha nwere maka mkpụrụedemede abụọ-byte, na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ ahụ dịkwuo elu.
Radixx Go departure services suite na Radixx Go Touch mobile ngwọta ga-enyere TOKI AIR aka ịmalite ọrụ nlele ya na ọdụ ụgbọ elu ma gbasaa ikike n'oge oge kachasị elu site na iji ndị na-agagharị agagharị. Ọnụ, desktọpụ ọrụ ọpụpụ na ngwọta mkpanaka ga-enyere aka ịmepụta ahụmịhe ọdụ ụgbọ elu dị mma maka ndị njem.
TOKI AIR ga-eji Radixx Insight mkpesa na ngwa nyocha iji mee mkpebi azụmaahịa ngwa ngwa ma baa uru na ozugbo.
"Obi dị anyị ụtọ ịgbasawanye mmekọrịta anyị bara uru na Japan ma nabata TOKI AIR na obodo Saber na Radixx," kwuru. Chris Collins, onye isi osote onye isi na onye isi njikwa maka Radixx. "Anyị nwere obi ụtọ ịnye ụgbọ elu ha teknụzụ na-eduzi ụlọ ọrụ anyị ma gbasie mbọ ike ịkwado mmejuputa enweghị nkebi ma na-ebi ndụ maka ụgbọ elu ha."
Ọnụ, usoro njem siri ike nke Saber na Radixx ga-enye ụlọ ọrụ ụgbọ elu ụlọ ahịa otu nkwụsị na-enye ma na-achịkwa usoro site na mmezu na ọrụ ụgbọ elu.
TOKI AIR ji ụgbọ elu nnwale si n'ọdụ ụgbọ elu Tokyo Narita gaa ọdụ ụgbọ elu Sado na Mee 24, 2021. TOKI AIR na-ezube ịmalite ire ahịa na Machị 2022 wee malite ọrụ ụgbọ elu n'etiti 2022. Ụgbọ elu ahụ na-ezube ịgbasa azụmahịa ibu ya na ATR Cargo. Ụgbọ elu Flex.
Banyere Sabre Corporation
Saber Corporation bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka sọftụwia na teknụzụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ njem n'ụwa niile, na-eje ozi n'ọtụtụ ụlọ ọrụ njem gụnyere ụgbọ elu, ndị na-anya ụlọ oriri na nkwari akụ, ụlọ ọrụ njem na ndị ọzọ na-ebubata ya. Ụlọ ọrụ ahụ na-enye ihe ngwọta ịzụ ahịa, nkesa na mmezu nke na-enyere ndị ahịa ya aka ịrụ ọrụ nke ọma, na-akpata ego ha nwetara ma na-enye ahụmahụ njem ahaziri iche. Site n'ahịa njem ya na-eduga, Saber na-ejikọ ndị na-ebubata njem na ndị na-azụ ahịa si gburugburu ụwa. Usoro teknụzụ Sabre na-ejikwa ihe karịrị $260B uru nke mmefu njem zuru ụwa ọnụ kwa afọ. N'ịbụ nke dị na Southlake, Texas, USA, Saber na-ejere ndị ahịa ozi karịa mba 160 gburugburu ụwa. Maka ozi ndị ọzọ nleta www.sabre.com.
Tọrọ ntọala na 1993, Radixx, onye isi na Orlando, Florida, na-ejikọta usoro teknụzụ ọhụrụ yana ụdị mmekọrịta pụrụ iche na-enyere ndị ụgbọ elu nke nha niile na ụdị azụmaahịa aka ịbụ ndị na-ere ahịa dị mma na ndị na-arụ ọrụ nke ọma. Radixx na-akwado ụgbọ elu LCC na ULCC, gụnyere nkwado nke nkesa GDS. Radixx na-enye Injin ntinye akwụkwọ ntanetị nke ụwa, Radixx ezyCommerce™, igwe ojii dabere na Ọrụ Ndị njem, Radixx Res™, yana onye isi ọrụ ọpụpụ, Radixx Go™, nke emebere iche iji mee ka ndị ụgbọ elu nwee ike ịbawanye uru ha wee bulie nrụpụta site na. gbasaa ọrụ nkesa. Kemgbe 2016, Radixx enyefela ọgbọ nke isii ya, sistemụ ọrụ ndị njem dabere na obere ọrụ. Maka ozi ndị ọzọ na Radixx, biko gaa na www.radixx.com.
Banyere TOKI Ikuku
Tọrọ ntọala na 2020, TOKI AIR bụ ụgbọ ala dị ọnụ ala nke ndị Niigata Chamber of Commerce na Niigata Association of Corporate Executives guzobere. A na-atụ anya na ụgbọ elu ọhụrụ a ga-arụ ụgbọ elu ATR gaa n'ụzọ mara mma dịka mpaghara Kansai, Nagoya, Sendai, na Sapporo. TOKI AIR na-ezube ịmalite ọrụ na 2022. Na TOKI AIR na-ezube ụzọ ọhụrụ jikọtara SADO-agwaetiti na Tokyo.